Dagaalka Suuriya: 33 askari oo Turki ah oo lagu dilay duqeyn cirka ah oo ka dhacday Idlib - BBC News Somali
Dagaalka Suuriya: 33 askari oo Turki ah oo lagu dilay duqeyn cirka ah oo ka dhacday Idlib
28 Febraayo 2020
Image caption Ciidammada Turkiga ayaa baritaaraya ciidammada fallaagada ee ku sugan waqooyiga Suuriya
Ugu yaraan 29 ciidammada waddanka Turkiga ah ayaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo ay gaysteen "ciidammada maamulka" Suuriya taas ka dhacday waqooyi galbeed ee Suuriya, sarkaal sare oo Turki ah ayaa sidaas sheegay.
Madaxweynaha Turkiga ayaa weerrarka kaddib waxa uu qabtay shir ammaan oo heersare ah.
Ciidammada Suuriya oo uu baritaarayo Ruushka ayaa waxa ay iskudayayaan inay fallaagada ay taageeraan ciidammada Turkiga dib uga qabsadaan gobolka Idlib.
Dagaal culus oo ka socda xudduuda Turkiga iyo Suuriya
Hasayeeshee dowladaha Suuriya iyo Ruushka ayaa diiday dalkaasi ah inay dib ugu gurtaan goobaha la kala joogay waqtigii xabbad joojinta 2018. Ruushka ayaa waxa uu Turkiga ku eedeeyay inuu ku xadgudbay heshiiskii xabbad joojinta 2018 maadaama uu fallaagada ku taageeray madaafiic.
Hay'adda ka shaqeysa xuquuqul insaanka Suuriya ee uu fadhigeedu yahay UK ayaa sheegtay in ugu yaraan 34 askari oo Turki ah lagu dilay weerarkii cirka ee habeenkii Khamiista dhacay.
Ciidammada dhaawacmay ayaa waxaa dib loogu celiyay dalka Turkiga si halkaas loogu dabiibo, ayuu yiri Mr Dogan.
Dhanka kale, Turkiga oo xubin ka ah gaashaanbuurta Nato ayaa sheegay in Wasiirka Arrimaha Dibadda wasiirka Mevlut Cavusoglu uu la hadlay Xoghayaha guud ee Nato Jens Stoltenberg.
Image caption Mevlut Cavusoglu, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga
Iskudhacyadan ugu dambeeyay ayaa yimid kaddib markii fallaagada uu Turkigu baritaaro ay sheegeen inay Khamiistii ciidammada dowladda Suuriya ay dib uga qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Saraqeb.
Dagaalka ka soconaya gobolka Idlib waxa uu horseeday inay guryahooda ka qaxaan ku dhawaad hal milyan oo qof oo reer Suuriya ah tan iyo bishii Diseembar. Qaramada Midoobay ayaa sheegay in hadduu dilaaco dagaal toos ah uu dhiig badan daadan doono.
Wakaaladda wararka ee Reuters oo Khamiistii soo xigatay sarkaal Turki ah ayaa sheegtay in Turkigu uu go'aansaday uu dabciyo ilaalada xadkiisa oo uusan qaxootiga Suuriya ka hor istaagin inay Yurub galaan. Sikastaba xaalku ha ahaadee, arrintaasi ma ahan mid si rasmi ah loo xaqiijiyay.
Gelinkii hore ee Khamiistii, Mr Erdogan ayaa sheegay in saddex arki oo Turki ah lagu dilay weerrar cirka ah oo ka dhacay Idlib.
Waasaradda Gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegtay inay weerrarkaas kaga jawaabtay inay garaacday bartilmaameedyo uu leeyahay maamulka Suuriya.
Ruushka ayaa diiday baaq uu usoo jeediyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo lagu dalbanayay xabbadjoojin bini'aadamnimo oo laga hirgaliyo waqooyiga Suuriya.
Dalkaas oo ka jawaabaya bayaan ay soo saareen Biljimka iyo Jarmalka ee ahaa inay qasab tahay in la joojiyo dilka dadka rayidka ah, ayaa safiirka Ruushka waxa uu sheegay in xalka kaliya uu yahay in dalka laga saaro waxa uu ugu yeeray argagixisada.